Japana: Tanora Masina, Jesoa sy Boddha nidina an-tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2009 9:27 GMT
Ahoana moa raha midina ety an-tany i Jesoa sy i Boddha mba hitsangatsangana faran'ny herinandro? ary ahoana moa raha miara-mipetraka amina efitrano mora vidy any Tachikawa andrefan'i Tokyo izy ireo? izany no eritreretin'i Hikaru Nakamura (中村光) [jp], tanora Japoney mpanoratra manga, raha miaraka amin'ireo Oniisan Masina (聖☆おにいさん [jp], dika mivantana ny Tanora Masina) izy, manga (tantara an-tsary japoney) mivoaka isam-bolana Maraina 2 (モーニング２) tamin'ny 2007 izay lasa be mpividy tokoa olana vitsivitsy lasa izay rehefa natambatra ho boky iray ny fizarana roa voalohany tamin'ny herintaona.
Ny fonon'ny Tanora Masina, vol.1
Maro ny mpamaham-bolongana mankafy ny hatsikana mifandraika amin'ireo singam-pivavahana amin'ireo mpankasitraka ny asa soratra manga an'i Nakamura. Ary maro ihany koa, tahaka an'i miyu (izay mpamaham-bolongana) no nanasongadina fa tena nosainina tokoa ireny kibokibo ireny.
Tantaran'i Bobbha sy Jesoa, nidina teto an-tany, izy ity, mba handany ny faran'ny herinandro eto an-tany ka hiaina anaty fiainana tsotra.
Boddha tena miavaka amin'ny resaka vola.
Jesoa sy ny fandaniam-bolany hividy, hividy hatrany. […]
Ny hevitro manokana?
“tena faly tokoa aho namaky azy ity”
[…] Na dia ny mahita an'i Boddha sy Jesoa manao t-shirt sy blue jean aza dia efa mampihomehy e!
Ary tena mahafinaritra tokoa ny mahita an'i Jesoa tamin'ny fonon'ny boky faharoa. […]
Tena sarotra anefa ny mandoko (manoritra) karazana tantara tahaka itony.
mampihomehy avokoa ny hatsikana rehetra, tena nahatalanjona ahy ny namaky [ny manga] sy ny fomba nanaovany ny tantara.
Tahaka izany ihany koa ny tenin'i Chihaya_K_Amou momba ny haavo lentan'ny tantara nanapa-tsinay ny mpamaky:
Tena nitokelaka tokoa aho!
Maharavo tokoa ny hatsikana tsirairay avy, fa raha mahalala ny momba ny fivavahana ianao dia mbola avy folo heny noho izay mampihomehy ny olona ny hehinao! Ary tena hihomehy hatrany ianao raha hainao avokoa ny hatsikana kristiana sy boddhista rehetra.
Ny Japoney ihany moa no afaka manoratra manga tahaka izao? Ary dia mieritreritra aho raha ny Japoneyihany no afaka mankafy ity manga ity.
Faly aho fa teraka Japoney.
Izaho manokana aloha, raha misy olona tahaka an-dry zalahy ireo monina ety amin'ny manodidina ahy aty dia karohiko mihitsy ny fomba ahazoako manao azy ireo ho namany e!
Sehatra iray ay ao amin'ilay manga.
Araka ny voalaza nandritra ny resadresaka nioaka tao amin'ny Jump Square magazine [ja], dia nahaliaina an'i Nakamura hatry ny ela ny sarisary (icone) Kristiana, fa tsy mpino na manam-pahaizana momba ny fivavahana izy na dia izany aza. Hany ka rehefa nitsiry tao aminy ny hevitra dia tsy nanadihady lalina intsony izy fandrao sarotra azon'ny olona loatra ny resaka. Niniana natao mivantambatana sy tsotra ny hatsikana, mora azo ary mampihomehy ny rehetra. Saingy, indrisy, misy ihany koa ny mpamaky tahaka an'i “fanahy mazava” sy Monamona no tsy mitovy hevitra amin'ireo mpamakafaka (critics) mankasitraka ny Tanora Masina.
Niezaka nividy ny “Tanora Masina” aho fa tsara, hono, izy izao.
Ary dia mahaliana tokoa aloha ny endrikendrik'ilay izy, Jesoa sy Boddha nidina mankaty amin'ny tontolo ankehitriny sy miara-miaina.
Saingy tsy manana fahalalana ampy ny mpanoratra hahatonga azy ireo ho toy ny miaina.
Na dia mamaky Baiboly sy ny dikantsoratry ny Sutras [mazava izany] fotsiny aza dia efa mety hahitan-javatra azo anaovana hatsikana ao, fa tsy ahitana ireny mihitsy ao amin'ilay manga.
Ary ny tena loza raha nojerena ny boky faharoa dia tsy hainy akory ny manavaka ny jinja [tempoly shintoista ] sy ny tera [tempoly boddhista].
Ry mpamoaka ny boky ô, saino izany!
Ary ny tena marina dia raisiko ny andraikitra fa ambany dia ambany koa ny haavom-pandalinan'ny mpamakafaka (critics) mametraka ny laharan'ity “manga milay” ity ho any amin'ny faratampon'ny filaharana.
Mba niandry ny fivoahan'ny manga tamin'ny aterineto aho saingy diso fanantenana ny amin'izay aloha.
Faraparany teo dia heverin'i yamada fa vokatry ny fampifangaroam-pivavahana nahazatra an'i Japana hatry ny fahagola no nahatafavoaka an'ity manga maneho olona malaza amin'ny fivavahana roa atao fampihomehezana ity.
Raha hilaza ny hevitro amin'ny teny iray momba ity manga ity aho dia tokony hoe: mampihomehy! efa izany hatrany moa rehefa mitokelaka amina hatsikana manga aho.
Ho ahy manokana, ny tantara anankiray izay tena nankafiziko dia ilay Jesoa nidina tao amin'ny dobo filomanosana iny dia lasa tahaka an'i Mosesy avy eo!
Na izany aza ny tena mahaliana ahy amin'ity tsangan'asa ity dia noho ilay vokatra vita Japoney.
Raha henonao ny fanenon'ny lakolosin'ny tempoly mandritra ny taombaovao, dia mandoa ny sara voalohany any an-tempoly mankalaza Krismasy, moa ve tsy izany fahazarana fangarom-pivavahana [Japoney] izany no niteraka ny manga?
Ny zavatra noeritreretiko voalohany indrindra dia izay mety ho hevitry ny mpino kristiana mafana fo raha mamaky azy ity ry zareo.